काठमाडौं, साउन ७ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले लक्ष्यभन्दा बढी २ खर्ब ५ अर्ब बराबर राजश्व संकलन गरेका छन् । यस अवधिमा १ खर्व ९४ अर्ब ६७ करोड बराबर राजश्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा २०७३ असारसम्म रु. २ खर्व ४ अर्ब ४३ करोड बढी असुली भएको विभागले जनाएको हो ।
ओटीसी बजार कारोबार शुल्कमा व्यापक कटौती
काठमाडौं, साउन ७ । ओभर द काउन्टर बजार (ओटीसी) कारोबार शुल्कमा व्यापक कटौती गरिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका तर सूचीकरण नभएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका धितोपत्रहरुको कारोबार हुने ओटीसी बजारको कारोबार प्रबद्र्धन गर्न कारोबार शुल्क ९० प्रतिशतसम्म घटाइएको धितोपत्र बोर्डले जानकारी गराएको हो ।
सुनको भाउ फेरि उकालो लाग्यो
काठमाडौं, साउन ७ । शुक्रबार सुनको मूल्य पुनः उकालो लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार पच्छ्याउँदै यसदिन स्थानीय बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ३ सय रुपैयाँले बृद्धि भएर ५८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
देशभक्तिका सम्बन्धमा उच्चारण गर्दा किन कसैलाई दुख्छ ? : अर्थमन्त्री, संसदमा कसले–के भने ?
काठमाडौं, साउन ७ । सरकारले पेस गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक व्यवस्थापिका–संसदले अस्वीकृत गरेको छ । बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले बेग्लाबेग्लै निर्णयार्थ प्रस्तुत् गरेको आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (२१औं संशोधन) विधेयकलाई ध्वनीमतका आधारमा बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।
‘मियावाकी प्रविधि’बाट रुख–विरुवाहरु रोप्दा शतप्रतिशत हुर्कने’ (भिडियो)
भिटोफ नेपालमा चुनावी रन्को, उम्मेदवारी दिने बढे
काठमाडौं, साउन ७ । गाउँ पर्यटन प्रर्बद्धन मञ्च (भिटोफ नेपाल)लाई चुनावी माहोलले तताएको छ । यही साउन १६ गते हुने महाधिवेशनका लागि विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिने बढेका छन् ।
ढुवानी भाडामा २५ देखि ३० प्रतिशत गिरावट
बारा, साउन ७ । बारामा ट्रकको ढुवानी भाडा घटेको छ । आवश्यकताभन्दा बढी ट्रक भएपछि ढुवानी भाडा घटेको हो ।
उर्जा संकट सरकारकै कारण लम्बिदैं, आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ भयावह हुने
काठमाडौं, साउन ७ । भारतबाट बिजुली किनेर उर्जा संकट घटाउने सरकारकै योजनामा असर पर्ने गरी अर्थमन्त्रालयले उल्टो निर्णय गरेको छ ।
इन्धन आपूर्तिको जिम्मा पाएका निजी कम्पनीको इजाजतपत्र अचानक सरकारद्वारा खारेज
काठमाडौं, साउन ७ । सरकारले इन्धनको कारोबार गर्न अनुमति प्रदान गरेका नौ वटा कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ ।
खानेपानी पहुँच र व्यवसायिक खेतीमा एनसेलको सहयोग
काठमाडौं, साउन ६ । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले स्याङ्जा जिल्लाका तीन गाउँलाई प्रविधिमार्फत् स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउन व्यवसायिक खेतीका लागि सहयोग गरेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा स्वागत्
काठमाडौं, साउन ६ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधनको निर्माण व्यवसायी महासंघले स्वागत् गरेको छ । महासंघले विहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी ७ वर्षपछिको अनवरत् प्रयासपछि ऐन संशोधन हुन सकेको भन्दै स्वागत् गरेको हो ।